Fa maninona Simona sy Angela? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Hafatra avy amin'i Simona sy Angela
Simona - Fahitana an'i Md Piera
... ary sisa amin'ny pretra mahatoky.
Angela: Betsaka no miala amin'ny fiangonana
Fa akaiky anao aho.
Angela: Mila vavaka ny fiangonana
Mivavaha mba tsy ho very ny tena finoana.
Simona - Fotoana sarotra miandry anao
Mivavaha ho an'ireo zanako malalako, dia ny pretra.
Simona - Fitiavana, ankizy, fitiavana
Anjaranao irery no manapa-kevitra momba ny fiainanao.
Angela - Fotoana sarotra miandry anao
Ny tena mampalahelo ahy dia tsy vonona daholo ianareo.
Simona sy Angela - Izao no fotoana hisafidianana
Na miaraka amin'i Kristy ianao na manohitra azy.
Simona sy Angela - Hisy andro haizina
Angela - Tsy misy fotoana intsony
Mihainoa dia henoy aho ary aza miahiahy momba ny zavatra tsy ilaina.
Angela - Pretra latsaka
Angela - Mangetaheta ny fahamarinana ny zanak'olombelona
... fa tsy mitsaha-mitsoaka ny fahasoavana.
Simona - Mila vavaka izao tontolo izao
Ny vavaka ihany no afaka mamindra tendrombohitra.
Angela - Aza matahotra
Mamelà ny lambako rehetra ianareo rehetra.
Simona - Tonga hanangona ny tafiko aho
Miomàna, ry zanako, miorena tsara ary mahereza amin'ny finoana.
Simona - Manangona ny tafiko aho
I Jesosy Tompo izay efa nitsangana ihany no hanome anao hery hanombohana indray.
Simona - Mivavaha tsy tapaka, mijoroa amin'ny fitiavana
Ry zanako, amin 'izao fotoan-tsarotra izao dia tsy mitsahatra mivavaka hatrany fa amin'ny fitiavana.
Simona - Fotoana fanapahan-kevitra
Ny Tomponay any Zaro, Italia mankany Simona, 26 febroary 2019: Anaka, aza avela hamitaka ny tenanareo ianareo ...
← Fa maninona i Luz de Maria de Bonilla?
Fa maninona i Pedro Regis? →